Ugaadhyahan: Sida Loo Helo B2B Ciwaanka Iimaylka Lala Xidhiidho ilbidhiqsiyo gudahood | Martech Zone
Waxaa jira waqtiyo aad runtii u baahan tahay inaad hesho ciwaanka iimaylka si aad ula xidhiidho saaxiibkaa oo aanad ku lahayn buugga ciwaanka. Mar walba waan la yaabay, tusaale ahaan, inta qof ee leh akoon LinkedIn ka diiwaan gashan a shakhsiyeed cinwaanka emailka. Waanu isku xidhan nahay, sidaa darteed kor baan u fiiriyaa, iimayl u dhiibaa… ka dibna waligay jawaab kama helin. Waxaan dhex mari doonaa dhammaan fariimaha tooska ah ee dhexmara baraha bulshada jawaabtuna waa ugu dambeyntii… "Oh, waligey ma hubin ciwaanka emailka." Dooh!
Hunter: Raadi Ciwaannada Iimaylka Xirfadlayaasha
Hal xal oo cajiib ah oo fudud ayaa ah Hunter. Maalin kasta, Hunter wuxuu booqdaa malaayiin bogag shabakad ah si uu u helo xogta ganacsi ee la qaban karo. Sida makiinadaha raadinta, waxay si joogto ah u hayaan tusmada shabakadda oo dhan waxayna habeeyaan xogta aan ku jirin xog kale oo kasta.
Hunter ayaa kuu ogolaanaya inaad hesho ciwaanno email xirfadeed ilbiriqsiyo gudahood la xiriir dadka muhiimka u ah ganacsigaaga. Si aad u isticmaasho Hunter, waxaad si fudud gelisaa boggaga oo guji Hel ciwaannada iimaylka.
Natiijooyinku waxay bixiyaan qaabab caadi ah oo loogu talagalay cinwaannada iimaylka iyo sidoo kale tirada ilaha laga helay ciwaanka iimaylka. Xitaa waxaad gujin kartaa ilaha oo waxaad arki kartaa halka iyo goorta xogta laga helay:
Hunter sidoo kale waxay awood kuu siinaysaa inaad:
Ku raadi magac - ka raadi magaca hore, magaca dambe, ama midkood domainka si aad u aragto in qof gaar ah ciwaankiisa uu ku qoran yahay.
Xaqiiji ciwaanka iimaylka – Geli iimaylka oo xaqiiji inay aaminsan yihiin inuu sax yahay iyo in kale.
Raadi qoraa - ka hel cinwaannada iimaylka qorayaasha maqaallada khadka tooska ah.
Wacyigelinta Iibka Hunter
Xiriir kasta oo aad ku aqoonsato Hunter waxaa lagu dari karaa a liiska hogaanka waadna geyn kartaa ololayaal email qabow adoo isku daraya Google Office ama Microsoft email account. Waa muuqaal aad u wanaagsan maadaama ay dhab ahaantii ka soo dirto iimaylka goobtaada iimaylka. Xitaa waxaad ku dhex dhisi kartaa habab shakhsiyeed.
Hadii aad saxiixdo Hunter, madalku waa bilaash iyada oo la baarayo ilaa 25 bishii.
Hel Ciwaanka Iimaylka Xirfadlayaasha
Shaacinta: Waxaan ku xirnahay Hunter oo waxaan isticmaalayaa xiriirkooda ku xiran maqaalkan.
Tags: b2bb2b ciwaanka emailkadhis liiska email qabowku dhis liiska emailkadhis liiska hogaankaemail qabowiimaylka wacdinta qabowraadinta iimaylka domaincinwaanka emailkacinwaanka iimaylka domainliiska emailkawacyigelinta emaylkaemail rajadaHel cinwaanka iimaylka qoraagahel cinwaanka emaylkaugaadhsadewacyigelinciwaanka emailka xirfada lehka raadi cinwaanka iimaylkaXaqiiji ciwaanka iimaylka